नेकपा एमाले « रिपोर्टर्स नेपाल
Tag: नेकपा एमाले
नेकपा एमालेसँग कुनै पनि वार्ता र सहकार्य हुन्नः एकीकृत समाजवादी
काठमाडौं, १५ असार । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव डा. वेदुराम भुसालले नेकपा एमालेसँग सहकार्य वा वार्ताका लागि कुनै सर्त नराखेको बताएका छन् । नेपाली
गठबन्धनले देउवाको विकल्प खोजोस्ः एमाले नेता
काठमाडौं, १४ असार । राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराईले कुनै नैतिकता जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री नमान्ने बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार
लौ न हाजिर गरेर हिँड्ने सांसदका बारेमा खोजेर समाचार लेखिदिनोस्ः विशाल भट्टराई
काठमाडौं, १३ असार । नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदमा एक दिन पनि प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी नभएको आरोप लगाएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम
अदालत नै ‘बायस’ छ, आजसम्म कुनै पनि कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटन सदर भएनः खगराज अधिकारी
काठमाडौं, १२ असार । नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले वामदेव गौतमको बोलीको कुनै ठेगान नभएको आरोप लगाएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि
माधव नेपाललाई जहिले १० को चुनौती
काठमाडौं, १० असार । नेकपा एमाले हुँदा माधव नेपाललाई १० जना नेताले पार्टी एकता कायमै राख्न दबाब दिएका थिए । तर, माधव नेपालले अस्वीकार गरेर विद्रोह गरे । माधव नेपाललाई
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा गरेर जेल जान तयार हुनुपर्छः लालबाबु पण्डित
काठमाडौं, ६ असार । नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डितले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा गरी जेल जान तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि
“केपी ओली आफैं संलग्न भएको भए एसपीपीको मुद्दा किन चर्काउनुहुन्थ्यो र ?”
काठमाडौं, ३ असार । नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) प्रकरणको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम
“अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अलिकति पनि लोकलज्जा छैन ?”
काठमाडौं, १ असार । नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य खगराज अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामाको विकल्प नभएको बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार
काठमाडौं, जेठ ३१ । मुलुकका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र वाम गठबन्धनतर्फ उन्मुख हुन थालेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विभिन्न तहबाट वाम गठबन्धनको कुरा
केपी ओलीलाई बालुवाटारबाट देश चलाएको भन्ने शेरबहादुर देउवा एक दिन पनि सिंहदरबार गएका छैनन्ः विशाल भट्टराई
काठमाडौं, ३० जेठ । नेकपा (एमाले) का नेता विशाल भट्टराईले ५ दलीय गठबन्धन देशका लागि बोझ भएकाले त्यसलाई भत्काउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का
काठमाडौं, २९ जेठ । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा. भीम रावलले एमसीसीमा हिन्द प्रशान्त रणनीतिक सैन्य गठबन्धन जोडिएको कुरा पुष्टि हुन लागेको बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क